Mpanjaka mamela heloka ary mpanompo tsy mamindra fo
"Tompoko, impiry moa no hanotan’ny rahalahiko amiko, ka havelako izy ? Hatramin’ny impito va ? Fa hoy Jesosy taminy : Tsy lazaiko aminao hoe : Hatramin’ny impito, fa hatramin’ny impito amby fitopolo." Matio 18:21,22
"Aoka samy halemy fanahy amin’ny namany avy ianareo, ka hifampiantra sy hifamela heloka, tahaka ny namelan’Andriamanitra ny helokareo ao amin’i Kristy." Efesiana 4:32
Fanoharana vitsivitsy; Matio 18:21-35
Famintinana: Nisy mpanjaka nidinika tamin’ny mpanompony, ny amin’ny volany. Ny iray tamin’ireo, nananany vola be tsy ho voaloan’io mpanompo io na oviana na oviana. Koa nitaraina tamin’ny tompony izy mba homeny andro, ary nampanantena fa handoa ny trosany rehetra. Onena azy ilay mpanjaka, ka nanafoana izany trosa goavana izany. Raha vantany vao afaka tamin’ny trosany io mpanompo io, dia nandeha nisetrasetra tamin’ny mpanompo iray hafa nananany vola kely, ary nitaky ny handoavany izany. Dia mba nitalaho taminy koa ilay namany, homeny andro, saingy tsy nahazo… Notantaraina tamin’ny mpanjaka izany toe-javatra izany, ka tezitra izy ary nanolotra ilay mpanompo voalohany ho amin’ny mpampijaly!
Heviny: Ny mpanjaka dia maneho an’Andriamanitra, Izay namela ny heloka be dia be nataontsika, namindra fo mihoatra lavitra noho izay takatry ny saintsika. Ilay mpanompo voalohany dia ny mpino izay tsy mahazo an-tsaina ny haben’ny fahasoavan’Andriamanitra, na dia nomeny zava-tsoa maro aza. Ilay mpanompo faharoa dia mpino iray nanao ratsy tamina mpino hafa, kanefa nangataka famelana taminy.
Fampiharana: Trosa be tsy hay refesina no nofoanan’Andriamanitra, tamin’ny namelany heloka antsika; koa inona moa, miohatra amin’izany, izay tsy rariny mba mety hihatra amintsika? Ny famelan-keloka noraisintsika tamin’Andriamanitra no manery antsika mba hamindra fo ihany koa.
Tsy nisy notanan’ny Tompo ny helotsika, fa navelany avokoa ! Nefa mba tiany kosa isika hampiseho fahalemem-panahy amin’ireo rahalahintsika mpino sy ireo rehetra manodidina antsika. Indray andro any isika dia hadinina momba ny fitondrantenantsika amin’ny maha kristiana antsika. Aoka ho vonona mandrakariva hamela heloka, tsy amin’ny vava ihany, fa “amin’ny fonao rehetra”, toy ny nataon’i Jesosy Kristy tamintsika.